መዝሙር 93 NASV - Nnwom 93 ASCB
1Awurade di ɔhene, wɔde tumi ahentadeɛ ahyɛ no;
wɔde tumi ahentadeɛ ahyɛ Awurade
na wɔde ahoɔden ayɛ nʼakodeɛ.
Wɔde ewiase atim hɔ pintinn;
2Wʼahennwa tim hɔ firi tete;
na wowɔ hɔ firi mmerɛsanten.
3Ao Awurade, ɛpo ama wɔn ho so,
ɛpo ama wɔn nne so;
ɛpo ama wɔn asorɔkye a ɛbɔ denden no so.
4Woyɛ deɛ ɔwɔ tumi sene nsuo akɛseɛ aprannaa,
deɛ ɔwɔ tumi sene ɛpo nworosoɔ.
Awurade a ɔte ɔsoro no yɛ kɛseɛ.
5Ao Awurade, wo nhyehyɛeɛ gyina hɔ pintinn;
kronkronyɛ hyɛ wo fie animuonyam
ASCB : Nnwom 93